Umama omncinci uncelisa umntwana wakhe unomtsalane kwaye umhle! Ngubani, umama akayizi njani iimvumba zakhe ukususela ekuzalweni kwakhe? Uyayiphatha njani? Ewe, kulula kakhulu - ukuncelisa isilumkiso sokuqala sokuthetha nomntwana. Ulwalamano oluzayo phakathi koomama nomntwana luxhomekeke kwindlela elidlula ngayo.
Bonke abantwana badla ngokungafaniyo: umntu unomdla ngokunyanisekileyo, umntu uthanda ukuncwina, kwaye umntu uvila aze alale ngokukhawuleza, ngokukhawuleza ukuba bayifake esifubeni sakhe. Naluphi na "u-sucker" wakho, kufuneka uqonde ngokucacileyo isalathisi sakhe esincinci kwaye ufumane indlela. Ukutya okufanelekileyo kukuqinisekisile kwikamva yengqondo yengqondo yomzimba.
Kukho iintlobo ezininzi zeentsana ezinikezelwe ngendlela abayifunayo ukuyidla.
Ngokunyanzela bayabamba ingxowa, nokuba ngaba abalambileyo. Bancoma kakhulu, ngamanye amaxesha banamandla kangangokuthi babuhlungu amabele kamama. Yidla ixesha elide, njengokutya konke, ukuhla kweyokugqibela. Umama ungcono ukusebenzisa izifakelelo zebele ukuze uzikhusele kwimichilo kwiinkiphu kwaye ugcine isifuba sempilweni. Musa ukuthatha isela eso kwisifuba de lizele ngokwaneleyo.
Jabulela yonke ihlazo lobisi lobamama, ufike kubo emlonyeni. Ngenxa yoko, bathanda ukuncelisa ibilanga ixesha elide. Ngaphambi kokuba badle, bathanda ubisi obushushu, bayihlambe emlonyeni, badlale nge ingono. Musa ukugijimisa umntwana, ezi zihlandlo zokuqala zibaluleke kuye njengokutya ngokwalo. Oku kummisela isondlo esihle kwaye kwandisa ubisi kumzimba womntwana. Ukuba uqala ukumncenga ukuba adle ngokukhawuleza, kunokuphazamisa kakhulu ukutyalwa kweemvuthu. Into ephambili ngezinyo ezintle - umonde!
Baqala ukuncelisa, kodwa kungekudala banokucinga ngento ethile okanye badibanise. Bathanda ukutya okunye kunye nokuphumla. Ukondliwa kwabacingi kude kube yimizuzu engamashumi amane. Akufanele baphoqeleke ukuba badle ngokukhawuleza kunokuba banokukwenza. Baya kuba nesidlo esihle kakhulu kunye nesimo esihle xa bengakhange baqhutywe.
Ezi ntambo zihlala zikhawuleza ukuba zitya kwaye zilahlekelwe ingunina yomama. Xa beyikhululile emlonyeni, baqala ukukhathazeka baze bakhala, kuba abanakukufumana ngokwabo. Abafunayo kwilahleko enjalo banokude baphelelwe yithemba. Ukuba umntwana wakho ungomnye walabo, ke kukulungele ukuzinqabisa phantsi kwaye umncede athole ingono ngexesha. Ukuba waqala ukukhala, ke, ngaphambi kokuba uqhubeke utyisa, mlawule, umgubungele, umculele ingoma, kwaye emva koko uqhubeke usondla.
Ivila-abantwana abaninzi abafuni ukutya. Kubonakala ngathi balindele ubisi lugeleza emilonyeni yabo. Ukuzondla ngabo kuwumsebenzi onzima, ngoko banokungabi namdla kwibele. Musa ukukhathazeka ukuba umntwana wakho wenqaba ukutya. Uya kuba novila ade alambile. Emva koko uya kudla ngaphandle kokuchasa. Ngokuqhelekileyo ukondla imivumba enobuhle ayihambi ngokuhambelana neshedyuli, kodwa indlela abaya kufuna ngayo, kuba awuyi kukwazi ukunondla umntwana onjalo kwishedyuli.
Okwangoku, oomama abaninzi, ukuze balondoloze ukubonakala kunye nesimo sebele, banqabile ngokupheleleyo ukusondeza. Oku kungalunganga, kuba ubisi lwebele luyisitya esiluncedo kakhulu kumntu omncinci ozelweyo, akukho nto iya kuqinisa umzimba wayo kwaye iwenze ibe nempilo kwaye ijabule, njengobisi lomama. Mama othandekayo, ukuba unethuba lokusondla, qi ni sekise! Ungamthinteli umntwana wakho onjalo ngokwenene njengento yobisi lwebele.
Ukuba umntwana ushushu, yimbole ekhaleni kunye nobisi lwebele, lusebenza kakuhle kubanda kwaye luqinisa amandla omzimba.
Umcebisi kunina onomnakekeli: ukuqinisekisa ukuba umntwana wakho unobisi obaneleyo ngelixa usondla, gcina i-diaper efudumele kwisifuba sakho ngaphambi kokuba uyondle, ngoko ubisi luya kwanda ngokubonakalayo!
Impilo kuwe nakumntwana wakho!
Iimpawu kunye nonyango lwe-diaper dermatitis
Ngaba ndingamncelisa xa umama egula?
Ukuphatha i-thrush kwiintsana ekhaya
I-Spring ihamba neklakishi yasePekinese
Imbewu ye-Chia, i-juniper pekmez kunye ne-lukuma powder: iimveliso ezintsha zobutsha bakho nobuhle
IHoroscope yeGemini-Abafazi ngoDisemba 2016
I-Sauce yokudla inyama "Gusar"
Amanyathelo ayisithandathu ebutyebi-ngokugcina
«Iifomathi ezintsha zentengiso». Imfundo yeeNtlanzi yeWP Media, iSt. Petersburg
Inkqubo yokwenza izinto ezincinci kunye nokwenza izinto
Ingaphakathi kwikamelo labantwana labafana
Guacamole kwi Grill
Timati, uAlyona Shishkova noAnastasia Reshetova baqhayisa imifanekiso evela kwabanye
Iibhere zeTeddy eziluhlaza